Lọ ọrụ - Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd.
Kemgbe 2009, XJCSENSOR bụ onye na - eduga nchịkwa nchịkwa njikwa yana onye na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ ahụ
Dị ka onye na-eduga ndị na-eweta sistemụ njikwa njikwa ihe nchịkwa, XJCSENSOR na-ekwusi ike na "ndị ahịa na-atụkwasị obi, na-adabere n'ịdị mma, na-agbanwe agbanwe nke onwe ha" dị ka ụkpụrụ azụmahịa anyị, ma na-agbaso "Nkwenye site na ọkachamara" dị ka nkà ihe ọmụma njikwa anyị. XJCSENSOR na-enye ọkachamara OEM ihe mmetụta maka ndị ahịa iji bulie afọ ojuju ha.
Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd. (XJCSENSOR) hiwere na 2009 na 4000 m2 mpaghara.
XJCSENSOR dị n'isi ụlọ ọrụ na SZ. CN, ma nwee ọfịs na Suzhou, Hong Kong & Germany.
XJCSENSOR bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba nwere ihe ikikere 40 na ngwa ngwa ngwanrọ.
Anyị nwere ndị otu R&D nwere ihe karịrị mmadụ 10 ndị nwere ọtụtụ afọ na -emepụta ma na-emepe emepe ahụmịhe na ụlọ ọrụ ihe mmetụta.
XJCSENSOR enwetala asambodo mba ofesi nke CE & Rohs, ma tinyekwa ya na usoro nlekọta ISO9001 & ESD, ma gosipụta ya dịka onye na-eweta ngwaahịa dị elu.
XJCSENSOR na-elekwasị anya na ike mmetụta sensọ, mkpụrụ ndụ ibu, ọtụtụ axis & torque ， sensọ, smart, sensọ na njikwa njikwa ihe, nke a na-eji na akụrụngwa akụrụngwa nzukọ, nkenke ọgwụ, ike ọhụrụ, robotik, semiconductors, nnyocha sayensị, eluer agụmakwụkwọ, wdg.
XJCSENSOR Akụkọ ihe mere eme
Officeslọ ọrụ XJCSENSOR ga-agbasa n’ụwa niile. XJCSENSOR otu ga-amata ọrụ ha, anyị ga-ewulite ụlọ akwụkwọ na mpaghara ndị dara ogbenye ma kwado ọrụ ụmụ akwụkwọ.
XJCSENSOR ga-eji teknụzụ micro-melting teknụzụ silicon, tinye ego na mmepụta maka semiconductors & sensọ pezoelectric, ma mepee ngalaba ụlọ ọrụ ma tinye R & D maka njikwa njikwa ngwanrọ.
XJCSENSOR ga-etinye ego nyocha sayensị na njikwa ihe ọgụgụ isi maka ịbụ onye ndu na ụlọ ọrụ ihe mmetụta, na-abawanye itinye ego na R&D nke ihe mmetụta dị elu iji kwado ụlọ ọrụ nhazi usoro CNC.
XJCSENSOR nwere ịgbasa mmepụta na ike R&D ike; mmejuputa ISO9001, ESD management system; nwetara iru eru SGS-CE & Rohs; Onwe-mepụtara erughị ala, torque, multi-axis ike sensọ, nke ide na ọgwụ na ahụ ike, ọhụrụ Energy, robotics, semiconductor ubi, wdg; Anyị na-akwado ebe ndị dara ogbenye na ikpokọta ndị ọrụ ịbanye na ndị ọrụ afọ ofufo.
XJCSENSOR nyekwara R&D na mmeputa ya na ihe nlere na mita. Anyị gosiri dị ka a elu-edu soplaya. XJCSENSOR ka akpọrọ nzukọ BOC site n'isi ụlọ ọrụ Apple na US site na 2016.
XJCSENSOR pụrụ iche na miniature ike sensọ, amplifiers, egosi, wdg nke na-eji na ulo oru akpaaka akụrụngwa, dị ka ekwentị ihuenyo & button nchọpụta, ọhụrụ ume akụrụngwa, wdg Anyị ruru eru dị ka ọkwa dị elu soplaya maka Apple na Huawei;
Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd. (XJCSENSOR) guzobere, na-arụ ọrụ ike sensọ, ampilifaya, wdg, tumadi na-eji na ulo oru akpaaka na ngwá, ọhụrụ ume ụlọ ọrụ ubi, wdg